नेकपामा प्रचण्ड र गौतमको टिम भने अर्को केपी र बादलको टिम, अब के होला ? «
नेकपामा प्रचण्ड र गौतमको टिम भने अर्को केपी र बादलको टिम, अब के होला ?
प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:०३
कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बहुमत एक ठाउँमा उभिएपछि अध्यक्ष ओली झस्किएका छन्।शीर्ष नेताहरुबीच सम्भावित समीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाव नमिल्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरो घोषणा र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन पर धकेलिएको छ।
कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बहुमत एक ठाउँमा उभिएपछि अध्यक्ष ओली झस्किएका छन्।
नेकपाका एक जना सचिवालय सदस्यका अनुसार छ जनाको यो समूहले कम्युनिस्ट पार्टीमा शक्तिशाली रुपमा लिइने संगठन विभाग प्रमुखमा वामदेव गौतमको नाम प्रस्ताव गरेको छ। बहुमत सचिवालय सदस्यहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि झस्केका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई अप्ठेरोमा पार्न पूर्वमाओवादी पक्षका सचिवालय सदस्य रामबादुर थापा ९बादल० लाई संगठन विभाग प्रमुखमा प्रस्ताव गरेका छन्।
‘प्रचण्डलाई गाह्रो पार्न र बहुमत (छ जना)को एकता भाँड्न सकिन्छ भन्ने ठानेर ओलीले गौतमको विकल्पमा बादललाई अघि सारेका हुन्’, ती सचिवालय सदस्यले भने।
नेपाली सेनाका जवान अपहरणको खबरले विप्लव नेकपा भित्रै खैलाबैला ,जवान सुरेन्द्र शाहीलाई अपहरण गरिएको हो : नेपाली सेना, विप्लव भन्छन् : दमनका लागि उक्साउने प्रपञ्च
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आफ्नो कार्यकर्ताले जाजारकोटमा सैनिक जवान अपहरण गरेको भन्ने खबरप्रति आपत्ति जनाएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले समाचारप्रति घोर आपत्ति रहेको बताएका हुन्।
विप्लवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समाचार पूर्णरुपले कपोलकल्पित, भ्रामक हुनका साथै हाम्रो पार्टी र हामीले सञ्चालन गरेको जनताको संघर्षद्वारा अत्तालिएको यो फासीवादी सत्ताको षड्यन्त्र बाहेक अरु केही नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं। मुख्य कुरा हाम्रो पार्टीको सुरक्षा निकाय वा व्यक्तिलाई अपहरण गर्ने कुनै नीति र योजना नै छैन।’
राष्ट्रिय स्तरको अखबारमा यस्तो समाचार आउनु आफैमा दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तमिा हाम्रो पार्टी र सुरक्षा निकायका बीचमा भ्रम सिर्जना गरी दमन गर्न उक्साउने नियतले प्रायोजन गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ।
अपहरण र जबरजस्ती चन्दा संलकनको पार्टी नीति नभएको जिकिर गर्दै आएको प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाले, चन्दाकै लागि जाजरकोटमा सैनिक जवान अपहरण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि, पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। बिदा मनाउन जाजरकोटको जुनीचाँदे घर गएको बेला वैशाख १६ गते रुपन्देही सैनामैनाको श्री नम्बर २ तालिम गणमा तालिमरत सैनिक जवान सुरेन्द्र बहादुर शाहीलाई विप्लवका कार्यकर्ताले अपहरण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि, प्रतिबन्धित नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको हो। खबर पाए लगत्तै नेकपाको हेडक्वार्टरले, जिल्ला इकाइलाई ताकेता गरेर सोधपुछ गर्‍यो।
आइतबार यस्तो खबर बाहिर आएपछि, जाजरकोटका नेकपा इन्चार्जले जिल्लाका काँग्रेस नेताहरुलाई एकपछि अर्को गरी फोन गरे। जुनीचाँदेको छिमकी बारेकोट गाउँपालिकाका महेन्द्र बहादुर शाहलाई बिहान नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो। जुनीचाँदे २ मा तपाईको पार्टीका मान्छे हामीले अपहरण गरेको भन्ने खबर आएछ। ती मान्छे तपाईंको पार्टीका मान्छे हुन् भन्ने छ। को हो, तिनीहरुको नाम ठेगाना, नम्बर दिनु पर्‍यो।
हामीलाई हेडक्वार्टरले सोधेर हैरान पारेको छ। ती मान्छे थिए, जाजरकोटका विप्लव नेकपा इन्चार्ज प्रेमप्रकाश वली ‘धमिल’। पार्टीको नीतिमै नभएको कुरा कसरी यो खबर आयो भन्दै रन्थनिएका धमिलसँग हामीले पनि कुरा गर्‍यौं। उनले भने, यो कपोल कल्पित र भ्रामक समाचार हो।
हामीले जाजरकोटमा अहिलेसम्म कसैलाई अपरहण गरेको छैन, कुनै नीति नै छैन। तपाईं पत्रकारहरु जे पायो त्यही समाचार लेखिदिने। उनले आपत्ति जनाए। कुरो के हो, त्यही भनिदिनुस् न त। हामीले अनुरोध गर्दा उनले भने, यो सबै हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गराउने षडयन्त्र हो, यसमा कुनै सत्यता छैन।
यही विषयमा हामीले जुनीचाँदे गाउँ पालिकाकि उपाध्यक्ष शिवा आचार्यलाई सोध्दा उनले पनि आज आइतबार मात्रै यो विषयबारे थाहा पाएपछि सोधखोज गर्दा अपहरणबारे कुनै जानकारी नपाएको बताइन्। सार्वजनिक खबर अनुसार, जुनीचाँदे २ का वडाअध्यक्ष बीर बहादुर शाहीका छोरा सैनिक जवान सुरेन्द्रलाई घरैबाट उठाएर लगिएको थियो। उनी वडा २ मा काँग्रेसबाट विजयी वडाअध्यक्ष भनिएको थियो।
विप्लबका जिल्ला इन्चार्ज धमिलले, वडा २ का अध्यक्ष पूर्व एमालेबाट विजयी राम बहादुर नेपाली हुन् र उनका ८ वर्षका छोरा छन्, कसरी अपहरण गर्नु भने। हामीले वडाअध्यक्ष नेपालीलाई फोन गर्दा शुरुमा उनले सोधे, के मलाई अपहरण गरेको भन्ने खबर हो र रु । उनले बीरबहादुर शाही वडा २ अध्यक्ष नभएर, वडा नम्बर ३ मा उठेर पराजित उम्मेदवार भएको र उनका छोरा सैनामैनामा तालिमरत रहेको तर उनी घर आएर अपहरणमा परेको भन्नेबारै गाउँमा कसैलाई थाहा नभएको बताए।
बीरबहादुरकै घर छेउकी स्थानीय कालिका प्राविकि वालशिक्षा शिक्षिका कालिका शाहीले पनि सुरेन्द्रलाई वैशाख ताका घर आएको बेला एकपटक देखेको तर अपहरण भएको भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको सुनाइन्। यही विषयलाई लिएर विप्लव नेकपाको हेडक्वार्टरले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ती निकालेको छ।
के भन्छ नेपाली सेना ?
जवान सुरेन्द्र शाही अपहरणबारे नेपाली सेनाले भने सत्य कुरा हो भनेको छ। नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी, सहायक रथी विज्ञान देव पाण्डेले, आफ्ना जवान घर बिदामा जाजरकोट घर गएको बेला विप्लव समूहका मान्छेले अपहरण गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार करीब १ हप्ता बन्धक बनाइएका जवान शाही, उनीहरुको कब्जाबाट भागेर आएर घटनाबारे ब्यारेकमा जानकारी गराएका हुन्। साथै पाण्डेले, विप्लब समूहले जवान शाहीका बाबुसँग विप्लव समूहले २ लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको र नदिएपछि अपहरण गरेको जानकारी आफुहरुले पाएको पनि बताए। यो घटनालाई लिएर सैनिक हेडक्वार्टरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताए।
गृहमन्त्रीलाई प्रश्न : के सिंहदरबार नै अब असुरक्षित भएको हो ?, गृहमन्त्रीको मातहतबाट प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा गएको गुप्तचर विभाग फेल
नेपालमा मूलतः दुईवटा गुप्तचर संस्थाहरु कार्यरत रहेका छन् । एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत् रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्को नेपाली सेनाको गुप्तचर सम्बन्धी काम गर्ने निर्देशनालय ।
गुप्तचर विभागलाई जरैदेखि सक्रिय गराउने भन्दै गृहमन्त्रालय मातहतबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको यो गुप्तचर विभागको असफलताका कारण आईतबार राजधानीको विभिन्न नौ स्थानहरुमा बम विस्फोटको प्रयास गरियो भने तीन ठाउँमा पड्किएको बमले राती १० बजेसम्म ४ जनाको ज्यान समेत गएको छ । यसमा प्रहरीले राती १० बजे दिएको जानकारी अनुसार ९ जना घाईते भएका छन् ।
झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेको बर्दी सहितका सुरक्षाकर्मी र हजारौंको संख्यामा रहेका गुप्तचरहरुका बाबजुत पनि देशको मुटु मानिने सिंहदरबारको ५ सय मिटर आसपास घट्टेकुलोमा समेत बम पड्कियो । अन्यमा नागढुंगा बाहेक अरु सबै चक्रपथ भित्र नै आधा दर्जन भन्दा बढी बम भेटियो । अहिलेसम्म सो विस्फोटको बारेमा कुनैपनि समूहले जिम्मा लिएका छैनन् । यद्यपि प्रहरीले यो विप्लव समूहले गराएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ । घट्टेकुलोमा भेटिएको विप्लवको पर्चाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बालहठका कारण विद्रोही समूहमाथि दमनको नीति लिँदा आईतबार राजधानीमा नै ३ जनाको ज्यान गएको छ । सरकारले विद्रोही पक्षलाई वार्तामा ल्याउनुको साँटो उल्टै पेलेरै जाने नीति ल्याउँदा अनाहकमा ३ नेपालीले राजधानीको केन्द्रमा नै बम विस्फोटबाट ज्यान गुमाउनु परेको हो । यसबाट आम मानिसहरु त्रसित बन्न पुगेका छन् ।
गत फाल्गुन २८ गते सरकारले एक पटक पनि वार्तामा नबोलाई विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र सो समूहले गर्ने सबै कार्यहरु अबैध घोषणा गरेको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीका विभिन्न भाषणहरुमा पनि उनी सो समूहलाई पेलेरै जाने पक्षमा देखिएका थिए ।
तर, उनले त्यतिबेला सोच्न सकेनन् कि कुनैपनि आतंक सिर्जना गर्ने समूहलाई जनताको माया हुँदैन । उनीहरु जनतामाथि त्रास देखाउनको लागि एक दुई जनाको हत्यालाई सामान्य मान्दछन् । जसरी माओवादी युद्धको समयमा तत्कालीन माओवादीहरुले पनि क्रान्तिमा एक दुईजना शहीद हुन्छन् भन्दै निर्दोषमाथि समेत गोली चलाएका थिए ।
शान्ति सुरक्षाको भरपुर व्यवस्था गर्नको लागि भनेर राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओली र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि आम मानिसले गर्नसक्ने एउटा गहकिलो प्रश्न खडा भएको छ के अब हाम्रो सिंहदरबार पनि असुरक्षित भएको हो रु हाम्रा १ लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरुले सिंहदरबारको आसपासमा समेत सुरक्षा दिन नसक्ने यति कमजोर सुरक्षा प्रणाली हामीहरुसँग छ रु यदि होईन भने राजधानीको जता त्यतै बम विस्फोटको योजना बन्दा समेत हाम्रा सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरहरु केमा रमाईरहेका छन् रु
आईतबार नै अनामनगर र सुकेधारा पछि काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा समेत बम विस्फोट भएको छ । जसमा दुई जना घाइते भएका छन् । सोही स्थानमा बम बोकेर मोटरसाईकलमा हिँडिरहेकाहरुको साथमा नै बम पड्किँदा उनीहरु घाईते भएका हुन् । यद्यपि कोटेश्वर, सातदोबाटो, ग्वार्को र लगनखेलमा भने बम नेपाली सेनाले निष्कृय पारेको छ ।
यसरी दिनदहाडै राजधानीको मुटुमा भएको बम विस्फोटको घटनाले सरकारको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको भान भएको छ । यस अघिका विभिन्न घटनालाई आत्मालोचना गर्नुको साँटो अरुलाई होच्याउँदै विभिन्न अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको कमजोरीका कारण यस्तो घटना भएको हो भन्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
विप्लवको बन्द आब्हानले जनजीवनमा आंशिक प्रभाव, शैक्षिक संस्था ठप्प, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, लामो दूरीका सवारी न्यून
हरेक किसिमका गतिविधिमा प्रतिवन्ध लागेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आव्हान गरेको नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ ।विप्ल्व समूहले पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार नेपाल बन्द आव्हान गरेको हो । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा हिंसा बढाउने किसिमले आइतबार टाइमर बम तयार गरिरहेका बेलामा सुकेधारा, घट्टेकुलो र थानकोटमा विष्फोट भएको थियो ।
उक्त घटनामा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै आठ जना घाइते भएका थिए । विप्लव समूहले बन्द आव्हानलाई आफ्ना कार्यकर्ता मारिएको विरोध भन्दै परिणत गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ । सवारी साधन अन्य दिनको तुलनामा कम चलेका छन् । मुख्य बजार बन्द छन् भने, भित्रि सडकका अधिकांश पसल खुलेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भने बन्दको प्रभाव बढी परेको छ । अधिकांश जिल्लामा सवारी सञ्चालनमा आएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट समेत सवारी न्यूनमात्रामा बाहिरिएका छन् । बन्दका क्रममा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
विप्लव समूहले यसअघि बन्दको आव्हान गर्नासाथ पहिलो प्रहार शैक्षिक संस्थामा हुँदै आएको छ । साना ठूला जस्तासुकै शैक्षिक संस्थामा यसको असर पर्दै आएको छ ।
आइतबार विष्फोट हुनुअगाडि नै विद्यालयहरु नखुल्ने सर्कुलर विद्यार्थीहरुमाझ गरिसकिएको थियो । केही खुल्ने मनस्थिति बनाएका विद्यालय पनि काठमाडौंमा भएको श्रृंखलावद्ध विष्फोटका कारण बन्द सर्कुलर गर्न वाध्य भएका थिए ।
डर र हिंसाले सुख, शान्ति र दिगो रूपान्तरण ल्याउदैनः विवेकशील नेपाली दल, नेपाल वन्द हैन खुला राख्न माग
डर र हिंसाको बाटोले सुख, शान्ति र दिगो रूपान्तरण नल्याउने विवेकशील नेपाली दल प्रष्ट पारेको छ। २०७६ जेठ १२ गते काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको श्रृंखलावद्ध बम विस्फोटको घटना पछि सोमबार विज्ञप्ती निकाल्दै दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। दलका प्रवक्ता मिलन पाण्डेले विज्ञप्ती निकाल्दै बम विष्फोटको भर्त्सना गरेका छन्। पाण्डेले जारीगरेको वक्तव्य यसप्रकार रहेको छः
बुद्धको देश भनेर चिनिने हाम्रो शान्ति भूमिमा कुनै पनि समस्याको समाधान डर९ त्रास, हिंसा ९ प्रतिहिंसा हुनै सक्दैन भन्ने विवेकशील नेपालीको दृढ विश्वास रहको छ।
यदि राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने बहानामा यी विवेकहीन गतिविधिहरू गरिएका भए हामी प्रस्टसँग आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छौँ९ अशान्तिको बाटोले शान्ति तथा दिगो समाज रूपान्तरण आउँदैन। यो कुरा हाम्रो आफ्नै देशको अनुभव तथा विश्व राजनीतिको अध्ययनले पनि देखाउँछ। सरकारलाई पनि शान्तिपूर्ण असहमतिका आवाजहरूलाई वार्ता र संवादद्वारा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सुनुवाइ गर्न अनुरोध गर्दछौँ। निषेध अनि प्रतिबन्धले समाधान दिँदैन।
अन्त्यमा आम नागरिकको चुलोमै प्रभाव पर्ने ‘नेपाल बन्द’ जस्ता हडताल नागरिकको हिँडडुलको स्वतन्त्रता र गरी खान पाउने मौलिक हकको हनन हो। यसको विकल्प खोज्न समेत विवेकशील नेपाली दल सम्बन्धित पक्षहरूलाई अनुरोध गर्दछ। नेपाल सदैव खुल्ला राखौँ ।
पोखरामा त्रास फैलाउँदै विप्लव समूह, तीन ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु
पोखराको विभिन्न तीन ठाउँमा सोमबार बिहान शङ्कास्पद वस्तु देखिएको छ । सिर्जनाचोक र फिर्केचोकको बीचमा एनसेल कार्यालय नजिक, दरबारमार्गस्थित एक पार्टी प्यालेसनजिक र नारेश्वरचोकस्थित सडकको पेटीका शङ्कास्पद वस्तु देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता रवीन्द्रमान गुरुङले जानकारी गराए ।
ती शङ्कास्पद वस्तु राखिएको क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । यसैबीच, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहद्वारा आव्हान गरिएको नेपाल बन्दको प्रभाव पोखरामा परेको छ ।
सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन बिहानैदेखि गुडेका छैनन् र शैक्षिक संस्थामा पनि बन्द रहेको छ । बजारमा चियापसल खुला छन् भने अन्य व्यापारिक पसल बन्द छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका अनुुसार कास्कीमा अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना नभएको बताइएको छ ।